Tronsmart na-ewepụta onyinye pụrụ iche na Nọvemba 11 na 12 yana ihe ruru 70% | Ozi gadget
Tronsmart, ụlọ ọrụ ọkachamara ọdịyo nke na-abanyewanye n'ahịa dị ụtọ dị ka ụda ikuku nwere ụdị ụzọ ọzọ. N'oge na-adịbeghị anya, anyị enyochala ụfọdụ n'ime ngwaahịa ha na-adọrọ mmasị ma anyị egosila gị ha ka ị nwee ike ịmata àgwà ha na ọrụ ha.
Tronsmart na-ekwupụta ụbọchị abụọ nke nnukwu onyinye na Nọvemba 11 na 12 ebe ị nwere ike zụta ngwaọrụ ha kacha mma yana mbelata ihe ruru pasenti iri ise. Chọpụta ihe onyinye ndị a na-atọ ụtọ bụ, echefula ha, wee nweta oke ego ga-eme na AliExpress.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ onyinye ngwaahịa Tronsmart niile, ị nwere ike nweta oke nkwalite site na ime pịa ebe a.
Dịka ọmụmaatụ, ekweisi Tronsmart Onyx Prime nke nwere ụda nkọwa dị elu maka Qualcomm QCC3040 processor na aptX codec na-enye site na Bluetooth 5.2 ahụmịhe ụda dị elu yana ihe karịrị awa iri anọ nke nnwere onwe (gụnyere ụgwọ emere na ikpe): Igwe ekweisi ndị a nwere ọnụ ahịa euro 107,20 mgbe niile ga-eri naanị euro 53,50 na AliExpress. n'oge nnukwu azụmahịa Tronsmart, nke pụtara mbelata karịa 50%. Ị nwere ike ịzụta ha ugbu a site ebe a.
Ọtụtụ onyinye ga-elekwasị anya na ekweisi na Nọvemba 11, mgbe anyị ga-ahụ mpụta mbụ nke Apollo Air, ngwaọrụ nwere kagbuo mkpọtụ na-arụ ọrụ ngwakọ ruru 35 dB na mkpokọta nwere oke ugboro dị iche iche. Ha nwere kagbuo cVc 8.0 na-arụ ọrụ nke na-enye gị ohere ilekwasị anya n'ịdị mma nke egwu na-enweghị nsogbu mpụga, si otú a na-emepụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkewa. Nke a na-adọrọ mmasị karịsịa maka ndị na-agba ígwè na ndị na-agba ọsọ ebe ọ bụ na ha ga-eme ụzọ ha na-etinye uche na ihe kacha amasị ha, mgbatị ahụ. N'okwu a, Apollo Air sitere na Tronsmart nke nwere ọnụ ahịa ihe ruru euro 70, ga-eri naanị euro 37,81., ezigbo mbelata dị nso na pasent 60 nke ị nwere ike ọ gaghị achọ ịhapụ yana ị nwere ike irite uru. na ịpị ebe a.
Ka ọ dị ugbu a, ihe nlereanya Onyx Ace, ekweisi nke ọkara na ntị maka ndị na-adịghị agbanwe agbanwe na ụdị intra-aural, na-enyekwa mbelata ego na-atọ ụtọ na Tronsmart Super Deals na AliExpress, na-achọta ekweisi ndị a nwere sistemụ igwe igwe igwe anọ. elu mma na n'ezie Qualcomm processor na-enye ihe kasị mma omume na okwu nke ụda.
Ndị a n'ezie nwere nnukwu mbelata nke 57%, na-aga na-eri naanị 24,70 euro na nke a nkwado price nke AliExpress. Ị nwere ike ịnweta onyinye a na ịpị ebe a. N'ezie ọnụahịa ịkụda maka ụfọdụ ekweisi ikuku ekwe ntị siri ike ịchọta n'ịtụle àgwà na-ekwe nkwa Tronsmart na-enye.
Mana ọ bụghị ihe niile ga-abụ ekweisi, enwerekwa oghere maka ndị na-ekwu okwu, malite na otu n'ime ụdị ya kacha pụta ìhè, nke Mega Pro, ngwaọrụ nwere ụdị nhata atọ dị iche iche site na otu bọtịnụ. Ọ na-enye ohere ijikọ site na sistemụ njikọ ya dị elu yana anyị nwere ike ruru 120W na ikike ịnye ụda 3D mebere. N'okwu a, anyị na-enweta mbelata 30%, yabụ ọ ga-anọ naanị na euro 81,04, ezigbo ohere ị nwere ike were ohere ebea.
Onyinye ikpeazụ na ọ bụghị n'ihi ya ihe kacha adọrọ mmasị bụ igwe okwu Nkeji 1, nke nwere ndị ọkwọ ụgbọ ala abụọ na radiator na-agafe agafe iji nye ọrụ dị mma site na usoro stereo ya nke 15W nke ike zuru ezu site na usoro DSP nwere ikike, nke na-eme ka anyị nweta nha nhata dị mma na ụda dị iche iche iji nye ahụmahụ ege ntị kacha mma. Ya mere, n'ihi ike nguzogide ya, ọ ga-abụ ezigbo enyi njem na nnọkọ anyị niile. ugbu a na mbelata 35% ọ ga-anọ naanị na euro 23,58 ịnweta ibe a na-enye.
Mee ihe kacha mma nke Tronsmart's Super Deals na AliExpress ma echefula ohere iji nweta ngwaahịa ụda kacha mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Tronsmart weputara onyinye pụrụ iche na Nọvemba 11 na 12 yana ihe ruru 70%